Tuesday, 10 Jan, 2017 2:34 PM
२३ बर्ष अघि स्थापना भएको नेको इन्सुरेन्सले व्यवसाय सञ्चालन गरेको पनि २२ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, माछापुछ्रे्र बैंक, कृषि विकास बैंक जस्ता बलिया प्रमोटर रहेको यस इन्सुरेन्सको पछिल्लो दिनहरुमा बित्तीय अवस्था पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
२०७३/७४ आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफा २ गुणा बढेर रू २ करोड ५० लाख पुगेको छ । नेकोले २८ गते बुधबार २१ औ साधारणसभा गर्दैछ । नेको इन्सुरेन्सको पछिल्लो वित्तीय अवस्था, निर्जीवन बिमा कम्पनीमा नेकोको स्थान, बिमा क्षेत्रको समस्या र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर न्यूजसेवाले कम्पनीका डेपुटी सीइओ अशोक कुमार खड्कासँग गरेको कुराकानीको अंश:
नेको इन्सुरेन्सको समग्र वित्तीय अबस्था कस्तो छ ?
हामीले पछिल्ला दुई बर्षमा हाम्रा लगानीकर्तालाई ४७ प्रतिशत लाभांश बाँडिसकेका छौं । हाम्रा प्रमोटरहरु पनि बलिया छन् । नेकोको चुँक्ता पूँजी ३२ करोड ४० लाख हो । तर २० प्रतिशत बोनस सेयर, १:१ (१ बराबर १) राइट सेयरपछि चुक्ता पूँजी ७१ करोड पुगेको छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीमा नेको इन्स्योरेन्सको स्थान कस्तो छ ?
नेको अहिले पाँचौ स्थानमा छ । दुई वर्ष अगाडि हामी १४औं स्थानमा थियौँ । तर नाफाको हिसावले त हामी सधैं छैटौं स्थानमा थियौं । १४ आँै स्थानमा ब्यापार हुँदा पनि हामी नाफाको हिसावले छैटौ स्थानमा रहेका थियौं तर पछिल्लो दुई वर्षमा धेरै फड्को मारेका छौं । यो बर्षलाई हेर्ने हो भने ६४ प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ छ ।
दुई वर्षमा यति ठुलो फड्को मारेर पाँचौ स्थानमा आउन कसरी सम्भव भयो ?
विषेश त हामीले अपनाएको रणननीति ‘क्लेम एज् सुन एज्’ थियो । तर यो कुराको प्रमाणित गर्ने मौका हामीलाई भुकम्पले गरिदियो । भुकम्पले नेकोलाई समयमै दाबी भुक्तानी गराउनु प्रमुख दायित्व हो भनेर झक्झक्यायो र हामीले सबै कुरा समयमै गर्न सक्यौं । आम मानिसको विश्वास हामीप्रति बढेर गयो । हाम्रो व्यापारिक रणनीति पनि अलि पृथक खालको नै थियो । जहाँ प्रतिस्पर्धा कम थियो त्यही पुग्यौं । बिमा कम्पनी नै नपुगेको ठाउँमा पुगेर भर्जिन मार्केट समात्न सफल भयौं । हामी तराईमा रौतहट, गौर, लाहान तथा पहाडमा इलाम, पाल्पा आदि क्षेत्रमा पुग्यौं ।
भुकम्पको बेला परेको दाबी भुक्तानी सबै भुक्तान भइसकेको हो ?
अहिलेसम्म हामीले ९८ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका छौँ । त्यो भनेको ६७ करोड भुक्तानी हो । हाम्रो खाताबाट ६÷७ करोड खर्च गरेपनि बाँकी सकै पुर्नबिमाले भुक्तानीमा सहजता ल्याइदियो ।
बीमाप्रति मानिसको विश्वास अझै पनि कम छ । भुक्तानी समयमै हुँदैन भन्ने आरोप पनि छ, बिमा कम्पनीप्रति । यसलाई कसरी चिर्छ नेकोले ?
हामीले यो धारणालाई बदल्नकै लागी नै स्थलगत कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यसको अर्थ घटना स्थलमै हाम्रो भुक्तानी हुन्छ । यो कार्यक्रम ल्याएको पाँच÷छ महिनामा नै प्रभावकारिता निकै राम्रो देखिएको छ । सुरुमा हामीलाई यस योजनाको स्वीकृति लिन पनि निकै गाह्रो भएको थियो । अन द स्पट भुक्तानीको योजना ल्याएको हामी नै पहिलो कम्पनी हौं । हालसम्म यो योजनामा कोही प्रतिस्पर्धी छैनन् । यसपछि सगरमाथाले गाडीलाई मात्र लक्षित गरेर एउटा योजना ल्याएको थियो ।
‘अन द स्पट’ भुक्तानी योजनामा समस्याको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसको स्विकृतीमै समस्या छ हो ?
यसको कारण भनेको रेगुलेटरले एउटा मात्र कम्पनीलाई होइन समग्र बजालाई हेरेर स्विकृती दिन्छ । जसकारण नै हामीले यसको लागि संघर्ष गर्नुपर्यो । अन्ततः संघर्षमा सफलता भने पायौं ।
‘स्पट पेमेन्ट’ सुरु गरेको करिब ६ महिनामा नेकोले कति दावीको भुक्तनी गर्यो ?
यस्ता धेरै केसहरुको ‘अन द स्पट’ भुक्तानी गरेका छौं । उदाहरणको लागि तपाई गाडी लिएर रसुवादेखि काठमाडौंको लागि आउँदै हुनुहुन्छ । यदि तपाईको साधन बाटोमा दुर्घटनामा पर्यो भने हामी त्यहाँ तत्काल जान त सम्भव ह्ँुदैन । त्यसको लागी तपाईसँग भएको मोबाइलबाट फोटो खिचेर हामीलाई पठाउनुहोस् । हामी त्यसैलाई प्रमाण मानेर लिस्टीङ गर्छौं र मूल्य निर्धारण गर्छाेैं अनि प्रकृया अगाडि बढाउछौं । त्यस पछि नजिकैको सर्विस सेन्टरमा गएर बनाउन सक्नुहुन्छ र यसको लागतलाई हामी क्यालकुलेशन गरेर भुक्तान गर्दछौं । हामीलाई तपाईले क्षति भएको सामान चाँहि पछि लिएर दिनु् पर्ने हुन्छ । यसो गर्नुको कारण कसैले झुठो विवरण नबुझाओस भनेर हो । यदि तपाईको कुनै साधन हाम्रो कार्यालयका कर्मचारी पुग्न सक्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको हो भने हाम्रा अधिकारीहरु घटना स्थलमा जानुहुन्छ त्यहाँ भएको क्षतिको एकिन गर्नु हुन्छ । तपाइलाई यति दिन सकिन्छ भनेर भन्छौ र घटनास्थलमा नै भुक्तानीको व्यवस्था गर्दछौं । यी सबैको अर्थ पहुँच नपुगेको ठाउँमा पनि सेवा दिनलाई पछि नपरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
फोटो खिचेकै आधारमा तपाइहरुको अधिकारी नै नपुगी मूल्यांकन गर्दा बीमा कम्पनीलाई झुक्याउने संभावना कत्तिको हुन्छ ?
हो तपाइले भनेजस्तो झुक्याउनेहरु पनि हुन्छन् । तर पछि उनीहरुसँग बसेर कुराकानी गर्नेवित्तिकै थाहा भइहाल्छ ।
बिमा कम्पनीलाई ठग्ने प्रबृत्तिचाहि कस्तो छ नेपालमा ?
ठग भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छन् र नेपालमा पनि छन् । तर बिमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठग्नेहरुलाई नै थाहा हुँदैन कि बिमा कम्पनीहरु जानेर ठगिन्छन् की नजानेर भन्ने कुरा । कहिले काँही आफू ठगिएको थाहा हुँदा हुँदै पनि कम्पनीको साख जोगउनकै लागि भएपनि बिमा कमपनीहरु ठगिन्छन् । तर नेको जानी जानी ठगिँदैन् । सेवामा कम्प्रमाइज गर्दैनौं र एकाध रुपैयाँ पनि छोड्दैनौं र दिने पैसा पनि एक रुपैयाँ राख्दैनौं । यदि सही दाबी छैन भने हामी एक रुपैयाँको लागी पनि अदालत पुग्न तयार हुन्छौं ।
बिमा क्षेत्रका अन्य चुनौती के–के छन् ?
अहिलेको मूख्य चुनौती भनेको फिल्डमा दक्ष म्यानपावरको कमि छ । मार्केटमा दक्ष जनशक्ति नहुनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
हुन त नेपालमा धेरै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको भनिन्छ । तर बिमा कम्पनीमा त बैंकमा जस्तै कमाइका हिसाबले पनि आकर्षण बढि हुनुपर्ने होइन र ?
म आफै पनि बैकिङ क्षेत्रबाट आएको हुँ । बिमा क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरुको लागि प्रशस्त ठाउँ छ । जो सुकैले पनि बिमा क्षेत्रमा आफ्नो करियर राम्रो बनाउन सक्छ जुन बैंकिङ सेक्टरमा छैन । बैंकमा टाइसुट लगाउने, कुर्सीमा बस्ने, हाइफाइ देखाउने, बाहिर घुम्न नपर्ने हुन्छ । तर यसमा क्षेत्रमा बाहिर घुम्नु पर्छ । फिल्डमा जानुपर्छ । तर पनि यो क्षेत्रमा अवसर थुप्रै भएपनि दक्ष कामदारको अभाव भएकै हो ।
पछिल्ला वर्षमा प्रयोग गर्दै गएको नेकोलाई आगामी दिनमा कुन ठाउँमा देख्न पाउने छन् लगानीकर्ताले ?
बिमा क्षेत्रमा विदेश जस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने नेको इन्स्योरेन्सलाई कसैले भट्दैनथ्यो होला । तर नीतिगत रुपमा विदेशमा जस्तो नेपालमा छैन । जस्तै हामीसँग ५ अर्ब क्यापिटल भएपनि मैले त्यो कहाँ लगेर राख्ने त ? सेविङ अकाउन्टमा, त्यो पनि ४ प्रतिशतमा ब्याजदरमा । यसको अर्थ लगानी गर्ने ठाउँ छैन । मैले त्यो पाँच अर्बलाई पर्याप्त ठाउँमा लागाउन पाउनु पर्यो नि त । सरकारले कहिल्यै बिमा कम्पनिलाई आइजा लगानी गर भनेको छ ? कहिल्यै पनि बिमा कम्पनिलाई लगानि गर्न बोलाएको छैन । हामीसँग पनि त लगानि गर्ने क्षमता छ, पैसा छ । बिमा कम्पनिहरुले ५०० मेगावाटको विजु्ली निकाल्न सक्ने क्षमता छ । यदि इन्सुरेन्सले गर्न चाह्यो भने आफ्नै देशमा ५०० मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्छन् । जसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपपर्यो । अहिले इन्स्योरेन्सको लगानीको सीमा पाँच प्रतिशत भन्दा धेरै छैन । नीतिगत रुपमै बिमाको दायरा ठूलो हुनुपर्छ ।
अहिले बिमा समितिमा आउनुभएको नयाँ अध्यक्षबाट बिमा कम्पनीहरुको अपेक्षा के छ ?
अहिले आउनुभएको नयाँ अध्यक्षबाट हामीले धेरै आशा राखेका छौ । राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायमा लामो समय अनुृभव संगाल्नु भएको उहाँबाट हामीलाई धेरै आशा छ । उहाँले समितिलाई पनि राष्ट्र बैंकजस्तै बनाउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि हो ।